FAQs - Zhejiang Yuking Technology Co., Ltd
aad OEM ama ODM karaa?
Haa, waxaan heysanaa koox xoog soo koraya. badeecada la samayn karaa si waafaqsan codsigaaga.
Waayo-baarka, markii hogaanka ku saabsan tahay 7 maalmood. Waayo, wax soo saarka mass, markii hogaanka waa 20-30 maalmood ka dib markii la helo lacag deebaaji ah. The jeer hogaanka u noqon wax ku ool ah marka (1) aannu ku helnay debaajigaaga, iyo (2) waxaan leenahay ogolaansho aad final ee wax soo saarka aad. Haddii jeer hogaanka our ma la xirmin suuqa shaqeeyaan, fadlan u gudbo shuruudaha aad la leedahay sale. In kiisaska oo dhan waxaan isku dayi doonaa in la tixgeliyo baahidaada. Xaaladaha intooda badan, innagu waxaynu nahay awoodaan in ay sidaas sameeyaan.
Waxaan damaanad qalab iyo sanco our. Waxaa naga go'an waa in aad ku qanacsan tahay la waxyaabaha our. In damaanad ama aan, waa dhaqanka ee shirkadda our si wax looga qabto iyo xalliyo arrimaha macaamiisha oo dhan inay ku qanacsan tahay qof
1303 Ocean Business Center, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, Shiinaha